Disneyland Paris ayaa dhigaysa sariirta soo dhaweynta
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » France Travel News » Disneyland Paris ayaa dhigaysa sariirta soo dhaweynta
Disneyland Paris ayaa dib loo furay
Disneyland Paris waxay ku dhawaaqday inay dib u fureyso Juun 17, 2021, oo ay weheliso Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney's Newport Bay Club, iyo Disney Village.
Disneyland Paris waxay xirtay bishii Maarso ee sanadkii hore ee 2020 markii masiibada ku dhufatay, dib loo furay bishii Luulyo ka dibna markale ayaa la xiray Oktoobar.
Waxay markii hore qorsheyneysay in dib loo furo bishii Febraayo ee sanadkan laakiin ka dib waxay ku dhawaaqday taariikhda dib u furista ee Abriil 2 oo mar kale miiska la soo dhigay.
Dhammaan booqdeyaasha da'doodu tahay 6 sano iyo wixii ka weyn, xubnaha kabka, iyo bixiyeyaasha adeegga waxaa looga baahan yahay inay xirtaan maaskaro.
Furitaanka Disneyland Paris waxay raaci doontaa talaabooyin caafimaad iyo badbaado oo sare loo qaaday. Si loo ixtiraamo kala fogaanshaha jireed ee ay ku taliyeen saraakiisha caafimaadka, tiro kooban oo laga soo galo beeraha Disney ayaa la heli karaa maalin kasta. Intaa waxaa sii dheer, dhammaan booqdayaasha da'doodu tahay 6 sano iyo wixii ka weyn, xubnaha kabka, iyo bixiyeyaasha adeegga waxaa looga baahan yahay inay xirtaan maaskaro.
At Disneyland Paris, iyadoo la raacayo tilmaamaha ka imanaya dowladda Faransiiska iyo mas'uuliyiinta caafimaadka, kala fogaanshaha jirka ayaa laga fulin doonaa dhammaan goobaha loo dalxiis tago safafka, raacida gawaarida, dukaamada, hoteelada, maqaayadaha, iyo tas-hiilaadka kale, calaamadaha ayaa la soo bandhigi doonaa si loo xusuusiyo
Beerta faransiiska waxay ka codsaneysaa martideeda inay kaqeyb galaan baaritaanka iskaa wax u qabso ah ee is-caafimaadka ka hor booqashada Disneyland Paris Faahfaahinta is-baaritaankaan waxaa ka mid ah kuwa soo socda.
Booqashada Disneyland Paris, martidu waxay dammaanad ka qaadayaan inaysan la kulmin wax calaamado ah COVID-19, oo ay ku jiraan qandho (ka sarreysa 38 digrii Celsius) ama qarqaryo, qufac, neefta oo ku qabata ama neefsashada oo ku adkaata, daal, muruq ama jir xanuun, madax xanuun, cusub dhadhan la'aan ama ur, cuno xanuun, lallabbo ama matag, ama shuban.